RIU Hotels & Resorts inovhura hotera nyowani muBulgaria
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » RIU Hotels & Resorts inovhura hotera nyowani muBulgaria
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bulgaria Kuputsa Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
RIU Hotels & Resorts yakavhura hotera nyowani muBulgaria, iyo Riu Astoria, hositi nyowani 4-nyeredzi zvese-zvinosanganisira zvivakwa zvinokatyamadza vashanyi nekuvakwa kwayo kwazvino nebasa. Iyo yakaoma iri muGolden Sands, nzvimbo inofungidzirwa kuve dombo reGungwa Dema uye imwe yemaparera eEastern Europe. Ndiyo chete hotera yeketani iri kuGolden Sands uye yechitanhatu muBulgaria, ine zvivakwa zvakatosimbiswa munzvimbo dzakadai seOzor, Pravets uye Sunny Beach.
Iyo Riu Astoria yakavhurwa musi wa 26 Kubvumbi uye ichange ichishanda munguva yezhizha. Inonakidzwa nenzvimbo ine runyararo mukati meBulgaria, makiromita makumi matatu nemanomwe kubva kuVarna airport, munzvimbo yakanyarara yeGolden Sands resort uye padyo nenzvimbo dzayo dzevanofamba netsoka, zvitoro, mabhawa uye maresitorendi. Ihotera yeRiu Astoria inorara yakananga pamahombekombe egungwa. Iyo 37 km-kureba gungwa rejecha rakanaka ingangoita 7 m kure nehotera. Kune nzvimbo diki yemahombekombe pamberi pehotera, yakachengeterwa chete vashanyi vepahotera, isina mahara sunbeds uye parasols zvavanogona.
Pamusoro pekungove padyo nemahombekombe uye panosvika nendege zviri nyore, hotera iri munzvimbo yakanaka yevashanyi kuti vaongorore mamwe emasaini emunyika akadai seguta reVarna, dhorobha neBotanic Garden. yeBalchik, Cape Kaliakra uye iyo Aladzha Monastery.